Dadka Ruushku Waxay Ku Fikiraan Inay Mar Uun Qabsadaan Gobolka ALASKA Ee Maraykanka | Somaliland Today
← Daawo Muuqaal: Badhasaabka Gobolka Gabiley Oo Ka Hadlay Xaaladda Gobolka Iyo Waxyaabaha KuCusub.
Nin Ciraaqi Ah Oo Gacantiisa Ku Sameeyay Gaadhi Gaashaaman Si Loogula Dagaalamo Daacish. →
Dadka Ruushku Waxay Ku Fikiraan Inay Mar Uun Qabsadaan Gobolka ALASKA Ee Maraykanka
(SLT-Moscow)-Maalin Sabti ah oo taariikdhu ahayd sanadkii 1867, Ruushka ayaa si Rasmi ugu wareejiyay gobolka Alaska Dalka Maraykanka, ku dhawaad qarni iyo badh ka dib waxaa murugsan xidhiidhka ka dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka iyada oo dadka Reer Raashiya ay markasta ku taamaan in gobolkan hore ay u wareejiyeen ay markale ku soo celiyaan dal weynaha Ruushka.
Dadka u dhashay Ruushka ayaa iyagu aan si weyn ugu faraxsaneyn talaabadii hogaamiyahoodii Alexander II uu gobolka Alaska oo dhulka uu ka fadhiyaa yahay 600,000 square uu ka iibiyo Maraykanka, isaga oo halkii qof biniaadam ah uu fadhiistaba uu xisaabsaday qiimo lacageed oo dhan 2senti.
Iyadoo ay ka soo wareegeen sanado farabadan hadana weli dadka Reer Raashiya waxay doonayaan in ay mar uun dib u soo ceshadaan dhulkan ay aaminsanyihiin in uu ka maqanyahay.
Dadka ku nool Ruushka ayaa badi waxa ay aaminsanyihiin in dhulka Alaska uu yahay dhul ka maqan oo ay tahay in ay helaan.
“Nacasyo ha noqonina Reer Maraykan” waa odhaah caan noqotay tan iyo markii Maraykanku uu kala daadiyay Ururkii Midowgii Sovieti . “Dib noogu soo celiya dhulkaya Alaska! Noo soo celiya dhulkayaga aan jecelnahay!”
Wixii ka danbeeyay la wareegistii gobolka Crimea waxaa isa sii tareysay cabsida ay qabaan dalal farabadan oo Ruushka xuduudo la leh oo iyagu ka cabsi qaba in Ruushku uu dib ugu soo noqdo dhul uu hore uga iibiyay ama uu ku wareejiyay.
“Alaska iyo Kremlinka” Waa hees caan ah oo dhawaan soo baxday tan iyo markii la soo saaray bishii September ee la soo dhaafay waxaa daawaday in ka badan 1 Milyan oo qof . “Alaska dib ha loogu celiyo Ruushka” waxa uu ahaa magaca uu la baxay petition ay saxiixeen 42,000 oo qof oo ku nool Maraykanka kaas oo si weyn ay soo qaadatay warbaahinta Ruushku ka hor intii aan meesha laga saarin sanadkan.
Alaska Waxa ay dadka Ruushku ugu magac dareen Ice Cream oo ah ereyga uu ka yimi magaca gobolka Crimea, oo luqada Ruushka loogu dhawaaqo si la mid ah ereyga Ingiriisiga ee ah ee turjumaadiisu noqoneyso Labeen “Cream”.
Ku xigeenka Wasiir Difaaca Ruushka Dmitry Rogozin ayaa dhawaan sheegay in Ruushku uu doonayo in uu xaqiijiyo buug sheegaya in kala iibsigii gobolka Alaska uu ahaa mid sharciga ka baxsan, waxaana uu ku dooday wareejinta gobolkani in ay tahay ta horseeday jabka soo gaadhay Ruushka.
Go’aanka uu Ruushku ku wareejiyay gobolka Alaska sanadkii 1867kii ayaa waxaa horseeday walaac uu Ruushku xiligaasi ka qabay in uu lumiyo maamulka gobolkan, kaas oo muhiim u ahaa dalweynaha Ruushka marka laga eego dhinacyda dhaqaalaha iyo awooda. Fikrada in Ruushku uu wareejiyo Alaska waxa ay soo baxday ka dib markii ay meesha ka bexeen awoodo ka tirsan qaarada Yurub oo ay xidhiidh lahaayeen Ruushka xiligii dagaalkii Crimea.